Ukuqhathaniswa Kwe-Amazon Nomhlaba! | Martech Zone
Ukuqhathaniswa Kwe-Amazon Nomhlaba!
NgoLwesithathu, uDisemba 21, 2011 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Andrew Davis
I-Amazon manje imi njengomunye wemithombo enamandla kakhulu yokuthengisa emhlabeni. Ngezigidi zamakhasimende asebenza kanzima nabalandeli, ayiphikisanga abanye abathengisi kuphela ngaphandle nangaphandle, kepha iziteshi zonke zokumaketha eziku-inthanethi.
Umkhiqizo omusha we-Amazon, i-Kindle Fire, uthathe ukugxekwa okunzima ngesonto eledlule. Akunandaba, ukuthengisa kusabonakala kukubi, nge ngaphezu kwezigidi ezingu-1 Ama-Kindle (kufaka phakathi ama-Kindle Fire) amayunithi athengiswa ngeviki lesithathu ngokulandelana.
Njengomthombo wenqwaba yethrafikhi efanelekile, i-Amazon ayigcini ngokubaluleka kumakhasimende kuphela kepha ezinkulungwaneni zabathengisi nabashicileli ababhala imikhiqizo yabo ezimakethe nangehlelo lokukhangisa le-PPC lase-Amazon, i-Amazon Product Ads.
Bheka infographic (A Isu le-CPC Okokuqala!) Ukubona ukuthi ama-Amazon alwa kanjani izimbangi zawo zokwabelana okukhulu kwezimakethe zomhlaba wokuthengisa nowezinsizakalo.
Tags: Amazonisu le-cpcezokuhweba ngekhompyutha
Izindleko Zomlando Zamaselula
Uhlelo Lokumaketha Olungenayo
Dec 21, 2011 ngo-10: 54 PM
Ngiyabonga kakhulu ngokwabelana ngalokhu. Kunezinsizakusebenza eziningi ezinhle lapha. Nginesiqiniseko sokuthi ngizophinde ngivakashele le ndawo kungekudala.